गर्भनिरोधका धेरै साधनहरु प्रयोग गर्दा गर्भ रहन्छ की रहन्न ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
गर्भनिरोधका धेरै साधनहरु प्रयोग गर्दा गर्भ रहन्छ की रहन्न ?
गर्भ निरोध साधन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हो की होईन ?
१८ वर्षको उमेर सम्म गर्भ निरोधको साधन प्रयोग गर्न उपयुक्त मानिदैन । गर्भ निरोधको साधन प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला फाईदा र बेफाईदा कति भन्ने विषयमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । जस्तै सानो उमेरमा विवाह भयो भने त्यो उमेरमा बच्चा जन्माउनु ठूलो जोखिम लिनु भन्दा, गर्भनिरोध साधनको जोखिम कम हुन्छ । त्यस्तो समयमा हो गर्भ निरोधको साधन प्रयोग गर्ने भनेको । सानै उमेरमा विवाह भएको छ भने अविभावक बन्नको लागि योग्य नहुदा गर्भ निरोध साधन प्रयोग गर्न सबैलाई उत्साहित गर्नुपर्छ ।
गर्भ निरोध साधनका असरहरु ?
कुनै पनि गर्भ निरोधको साधनले असर गर्देन भन्न त मिल्दैन । यदि तपाईको उमेर सानै भएको अवस्थामा गर्भनिरोधको साधन प्रयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने दुई वटा साधन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । एक, पुरुषले प्रयोग गर्न मिल्ने साधन कण्डम । महिलाले लगाउने गर्भ निरोध साधन कण्डम पनि पाईन्छ तर महङगो र हाम्रो देशमा किन्न सक्ने र प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएको कारण नेपालमा फिमेल कण्डम धेरै प्रयोग हुँदैन ।
दोस्रो, हरेक दिन खाने गर्भ निरोधको पिल्स नामको चक्की पाईन्छ । यो दुई प्रकारको गर्भ निरोधको साधन सानो उमेरको लागि उपयुक्त हुन्छ । संगीनी सुई, कपर्टी लगायत गर्भ निरोधको धेरै साधनहरु छन् । तर सानो उमेरमा प्रयोग गर्दा समस्या आउन सक्छ ।
धेरै परिवार नियोजनका अस्थाई साधनहरु प्रयोग गर्दा बच्चा हुँदैन भन्ने कुरा के सहि हो ?
परिवार नियोजनका अस्थाई साधन जस्तै तपाईले ५ वर्षको लागि ३ महिने सुई लगाउनु भयो र बच्चा जन्माउने इच्छा देखाउनु भयो भने तपाईको शरीरलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्कनको लागि पनि केही समय लाग्न सक्छ । बच्चा नहुने भन्ने होईन तर गर्भ रहनको लागि लामो समय लाग्छ । पिल्स प्रयोग गर्नु भयो भने तपाईले चाहेको समयमा आमा बन्न सक्नुहुन्छ । अस्थाई साधन प्रयोग गर्दा बच्चा नहुने हो की भन्ने चै भ्रम हो । लामो समयसम्म हर्मन युक्त औषधी खानुभयो भने तपाईको शरीरमा असर गर्नसक्छ । त्यसकारण कुनै पनि गर्भ निरोधको साधन लामो समयसम्म प्रयोग नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।
संगीनी सुई लगाउँदा पनि गर्भ रहन्छ र ?
संगीनी सुई लगाउनु भन्दा पहिला नै गर्भ रहेको पनि हुनसक्छ । अथवा सुई लगाएको ७ देखि १० दिनसम्म काम नगर्ने हुँदा यो अवधिमा यौन सम्पर्क भयो भने गर्भ रहन सक्छ । डेट सकिएको औषधी पनि पर्न सक्छ । जोखिम हुन सक्छ त्यो समयमा कण्डमको प्रयोग गर्दा राम्रो ।
गर्भ निरोध साधन प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा क्यान्सर हुन्छ भन्ने पनि छ नि ?
पिल्स, डिपो, इम्प्लान्ट भनेको हर्मनयुक्त औषधी हो । यी सबै परिवार नियोजनको अस्थाई साधन हुन् । औषधीले क्यान्सर गराउँछ भन्ने छैन । तर क्यान्सरको सम्भावना भएको व्यक्तिले यो औषधी प्रयोग गर्दा छिटो क्यान्सर हुनसक्छ । भ्यासेक्टोमी भनेको स्थाई बन्ध्याकरण हो । पुरुषको दुईवटा सुक्र बाहिनी नलीलाई काटेर बाँध्ने हो यो सामान्य अप्रेशन हो । यसमा क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्न ।
भ्यासेक्टोमी गरे पछि विर्य सकिन्छ भन्छन् नि ?
भ्यासेक्टोमी गर्दा शुक्र बाहिनी नली बाँध्ने हो । विर्य र शुक्र बाहिनी नली फरक कुरा हो । शुक्रकिटले गर्भ रहने हो र त्यो नली बन्द भएको हुन्छ । भ्यासेक्टोमी गर्दा विर्य उत्पादनमा समस्या हुन्न ।
डाक्टर खेम कार्कीसंगको कुराकानीमा आधारित
एपी.वान. टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको कार्यक्रम नेपाल आईडलमा अब छ प्रतिस्पर्धी बाँकी छन । आज टप ५को छिनोफानो हुदै छ । अघिल्लो साता नेपाल आड..